Maningi amathuba okuthi limgojele icala uDuduzane Zuma - Izazi zomthetho | News24
INational Prosecution Authority (NPA) iveze ukuthi izoqhubeka nokushushisa uDuduzane Zuma kulandela ukuthi ehlulekile ukuhlangabezana nomnqamulajuqu wezinyanga ezimbili abebekelwe wona wokwenza izethulo zokuthi kungani kumele angashushiswa.
UDuduzane, oyingane kalowo obengumengameli uJacob Zuma, uzobhekana necala lokubulala ngokungenhloso ngemuva kokuthi imoto yakhe yohlobo lwePorsche yashayisana netekisi ngo-2014, kwashona uPhumzile Dube.
UMqondisi weSheridan Attorneys, uDonovan Sheridan, uthi akazikholwa izinsolo ezithi imizamo yabashushisi yokubophela uZuma amanqina enyathi iyingenxa yokuthi i-NPA ayikwazanga ukwenza okufanayo emacaleni amayelana nokuyamaniswa kwakhe nabakwaGupta, njengokucabanga kwabanye babalandeli bakaZuma.
OLUNYE UDABA: Indodana kaZuma ithi ikulungele ukubuya kuleli izogeza igama layo
"Linqala icala abhekene nalo. Kwakumele baqhubeke nokumshushisa kwasekuqaleni," esho.
Uthe enye inselelo ebhekene ne-NPA wukuba uZuma ayovela enkantolo.
"Angicabangi ukuthi ukhona ezweni. Kuzoba ngumnqansa ukuthi i-NPA ikwazi ukuqinisekisa ukuthi uyavela enkantolo. Kuzomele kufakwe incwadi enkantolo egunyaza ukuba abuyele eNingizimu Afrika azobhekana namacala akhe, nokuyinto ezothatha isikhathi eside," kuqhuba uSheridan.
UMengameli weBlack Lawyers Association, uLutendo Sigogo, uthe bekungeke kwenzeke ukuthi i-NPA ivule leli cala kabusha ibe ingenabo ubufakazi obusha.
Unanele ngokuthi akacabangi ukuthi lolu phiko lushushisa uZuma ngezizathu zepolitiki.